Ulwazi Common - Hangzhou DryAir Ukwelashwa Co., Ltd
1. Ukubandisa dehumidification
Umoya is selehlile ngezansi iphuzu amazolo, bese amanzi olujiyile iyasuswa.
Le ndlela iphumelela ngaphansi kombandela wokuthi iphuzu amazolo kuyinto 8 ~ 10 ℃ noma ngaphezulu.
2. Ukuminyanisa dehumidification
cindezela bese kuphole umoya onomswakama ukuhlukanisa umswakama.
Le ndlela iphumelela lapho ivolumu umoya incane kodwa asihambisani nemibandela enkulu emoyeni omningi.
3. Uketshezi ukumuncwa dehumidification
Lithium chloride isixazululo spray isetshenziswa ungamunca umswakama.
Iphuzu namazolo zingancishiswa -20 ℃ noma kunjalo, kodwa imishini likhulu, futhi uketshezi ukumuncwa kumelwe ithathelwe.
I Imicu yotshani Ceramic ka elifakwe ukungena nakwamanye amazwe ejenti hygroscopic okwenziwa ku abagijimi lezinyosi-ukuthanda umoya omncane.
Isakhiwo dehumidification ilula, ongafinyelela -60 ℃ noma ngaphansi ngokusebenzisa inhlanganisela ekhethekile amazolo amaphuzu.
Lena indlela esetshenziswa Jierui.
NMP imele N-Methyl-2-Pyrrolidone
Njengoba NMP has okusezingeni eliphezulu ukuvala abacaphuni futhi ongaphakeme umusi ingcindezi ngaphansi lokushisa evamile, it kungenziwa kalula akuncishisiwe ngu ukupholisa ngezansi lokushisa evamile. Ngokusho formula Antoine, Esebenzisa isici yayo, nokuvulwa NMP kungenziwa olwenziwa ukupholisa (inqobo yokutakula amanzi lemali luyanda uma umshini wokomisa qeda gas luqukethe amanzi ngaphezulu).
Izinzuzo of VOC lokuhlushwa rotors:
ukusebenza 1.High & kahle
Ukusebenzisa High Silica zeolites futhi carbons isebenze nge ezinkulukazi adsorption umthamo ivumela VOCconcentrator kwethu nezimo aphathe izinhlobo ezihlukahlukene zezindwangu ezingaba VOCs futhi basebenze ngaphansi kwezimo ezihluke wokusebenza.
2.Capability kokuphatha VOCs nge high ukuvala abacaphuni
Carbon impahla has a nobunzima ukwelapha VOCs nge high ukuvala abacaphuni ngenxa desorption lokushisa yayo mkhawulo. Ngokuphambene, izici zeolite yethu rotors kukhona incombustible futhi okusezingeni eliphezulu ukushisa ukumelana, okuyinto eyenza VOC yethu concentrator ukusebenzisa emoyeni adsorption nge lokushisa eliphezulu.
VOC polymerized kalula wukushisa amandla (isib styrene, cyclohexanone, njll) kungenziwa ngokuphumelelayo selashwe High-Silica zeolite.
4.Cleanability & kusebenze by ukwelashwa okukhethekile ukushisa
zeolite yethu rotors ngokusebenzisa inqubo calcining laba bafikile ukubashaya zonke izinto wezinto kuhlanganise ingcina. Odla e element Rotor engase yenzeke ngemuva kwenkathi ethile use.But, ungakhathazeki !! Rotor kuyinto washable ngendlela efanele ukuze susa zanqwabelana dust.It sika kangcono ngisho ukuthi zeolite yethu Rotor kungenziwa sivunyelwe ukusebenza by ukwelashwa ukushisa ngokushiyana kuye ngezimo.
Izicelo okuvamile VOC lokuhlushwa rotors:
Okungenzeka Insiza / Mkhiqizo umugqa kuncike VOCs ukulawula
umakhi Izithuthi / Izingxenye Painting idokodo Toluene, Xylene, Esters, alcohols
Steel ifenisha umenzi Ukudweba idokodo, umshini
Yesigcilikisha / Magnetic nomkhiqizi tape inqubo esinemthombo, yokuhlanza iyunithi Ketones, Mek, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, njll
amakhemikhali Amafutha yokuhluza, Reactor hydrocarbon elimnandi, acid Organic, Aldehydes, alcohols
resin Zokwenziwa / Glue Maker Plastics, Plywood yokukhiqiza inqubo Styrene, Aldehydes, Esters
Semi-umqhubi Yokuhlanza iyunithi Alcohols, Ketones, ama
Ngilusizo namazolo ithebula iphuzu ukuguqulwa: